Solutions Full si iPhone daryaan / reboot uu keeno Text Message iPhone shilka
Apple ee isticmaala iPhone soo food cayayaanka ah shil cusub hadda. Fariin qoraal fudud A, laga bilaabo erayga "wax ku ool ah", waxay keeni kartaa iPhone inaad shil gasho. Hadda, in badan oo dadka isticmaala iPhone la kulanto tan. Qaar ka mid ah ka soo baxsaday shilka, iyo qaar ka mid ah waxaa lagu madaxooda iyagoo weli ku feegaaro. Si aad u hesho iPhone caadi ah dib u, halkan waa xal buuxda si aad isugu daydo. Ha iloobin in aad iyaga la wadaagto dadka u baahan idinku wareegsan.
First of dhan, aynu hubiyo sida fariinta dhibsado u eg Dhulka:
wax ku ool ah.
Rajaynaynaa in aad marnaba heli doontaa.
Taxadar ee dhammaan dadka isticmaala iPhone
Si aad naftaada looga hortago kufid dhibanaha in ay kutaan ah, waxaad tegi kartaa habka aad goobaha iyo demi Walba oo farriin qoraal (Notifications> Messages> Show Falanqeynta). Si aad ugu dhawri doonaa isagoo shil degdeg ah marka ay fariin sida caadiga ah, laakiin dadka qaar ayaa sheegay in isticmaalka, WhatsApp ka LINE ama xataa mail loogu Fariin sidoo kale keeni kara cayayaanka ka. Waa in aad ka taxadartaa si aad u hubiso fariin hadda ka dib.
Xalka 1: reboot aad iPhone
Waxaad dooran kartaa in aad reboot iPhone, haddii app Message ama barnaamijyadooda kale Fariin uma shaqeeyo. Tani waa habka ugu fudud ee aad u hesho iPhone ka mid ah shilka. Ha ogaadaan sida? Demi in xalka 5 .
Xalka 2: Waydii diraha si aad u soo diray farriin kale
Marka aad heshay fariin this shil iPhone, waxay leeyihiin qofka soo diray inaad waxaas u aad u soo diray farriin kale. Tani wax ku ool ah ka caawin doona in ay kansashay qaybta hore.
Xalka 3: U dir fariin nafsaddaada
Haddii Quraanka uma shaqeeyo on your iPhone, waxaad weydiisan kartaa Siri inay kuu soo diraan fariin ah. Tani waxay sidoo kale ka shaqeyn doonaan. Mise waxaad isku dayi kartaa in aad isticmaasho iPad ah ama Mac in aan fariin u dirno si aad iPhone via iMessage.
Xalka 4. dir sawir si xiriir ah via app Photos
Xal Arrintani waxaa isku raacsan user ah, oo wuxuu ku yidhi "diraya sawir si xiriir ah via app Photos ogolaan karo si ay u helaan taariikhda fariin iyo tirtirto wadahadalka". Hab kasta, waxaad heli kartaa isku day ah haddii aan jid lahayn wax ku ool ah.
Xalka 5. idil tirtir fariin shilka
Kasta iPhone waa xaalad ka duwan. Sidaas xal u kala duwanaan karaan sida ay shuruud gaar ah. Haddii aadan tirtiri kartaa fariin ama tirtirka fariin uma shaqeeyo, waxaad u baahan tahay in ay masixi khasnado ee fariinta ka iPhone. Ma ahan wax fudud loo sameeyo gacanta keligaa, laakiin qalab dhinac saddexaad - SafeEraser Wondershare , ma ahan gumaarka ah.
Maxay SafeEraser Wondershare sameeyo si uu u xaliyo tan arin shil iPhone?
1. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka iPhone tirtirto fariin haddii aad u ma aan samayn karo iyadoo la isticmaalayo "masixi Private Data" iyo dooran "Messages".
2. Waa in aad awood u masixi xogta tirtiray in aadan si buuxda ma uu samayn. Waxaad u malayn in aad tirtiray fariin shil ka iPhone, laakiin aadan ku sameeyey xaqiiqda. Tallaabo ah "tirtirto" Your ka dhigaysa kaliya fariin aan la arki karin. Waxaa weli jira meel. Sidaas, waxaad saari karaan waxaa ka mid ah gabi ahaanba iyadoo la isticmaalayo "masixi tirtiray Files" iyo dooran "Messages".
Waxaad ka heli kartaa version maxkamad barnaamijka u leedahay in isku day ah haddii aad leedahay sida loo baahan yahay.
Gunaanad: users Qaar ka mid ah ayaa sheegay in fariinta shil taasina waa sababta keentay in ay iPhone galay Recovery Mode. Xaaladdan oo kale, si fudud iyaga waxaad ka heli kartaa ka mid ah Recovery Mode adigoo isticmaalaya Lugood ama gacanta goobaha. Waxaad ka akhrisan kartaa xalka faahfaahsan oo aad ku iPhone ka mid ah Recovery Mode halkan.
Haddii xal kor ku shaqo aad u, ha iloobin in aad iyaga la wadaagto aad saaxiibo u baahan. Haddii aad qabto wax xal kale oo weyn oo wax ku ool ah, sidoo kale iyaga oo aad la wadaagi karto noo faalada ee hoose.
> Resource > iPhone > Solutions Full si The iPhone daryaan / reboot keeno Text iPhone Shil Mes